Yamar YH700/ YH850
<p>တောင်သူဦးကြီးများ၏ လုပ်ငန်းများ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းများအတွက် အဆင်ပြေတိုးတက်စေဖို့ရာ GPS စနစ်သုံးဝန်ဆောင်မှုအားစက်များတွင် တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။</p><p>ဝန်ဆောင်မှု(၁)</p><p>စက်၏မောင်းနှင်းချိန်နှင့် အလုပ်လုပ်နေမှုများကို တွေ့မြင်သုံးသပ်နိုင်ပြီး စက်၏ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်မလိုလားအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များလျော့ချဖို့ရာ လမ်းညွန်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>ဝန်ဆောင်မှု(၂)</p><p>ကနေဦးအနေဖြင့် စက်၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပျက်စီးမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီစသိရှိနိုင်ပြီး အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပျက်စီးမှုများကို တိကျစွာပြင်ဆင်နိုင် ခြင်း။</p><p>ဝန်ဆောင်မှု(၃)</p><p>Smart Assist Pemot (GPS) တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် စက်၏အလုပ်လုပ်ပုံတေနှင့် မလိုလားအပ်သူတို့၏ထိခိုက်စေမှု ၊ ခိုးယူမှုတေကို ဖုန်း(သို့)အီးမေးလ်ဖြင့် အလွယ်တကူ မသိပေးနိုင်ခြင်း။</p>
<p>စွမ်းအားနှင့် ကြီးမားသည့် ထွန်ယက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်တို့ ပေါင်းစက်ထားသည့် Yamar လယ်ထွန်စက် M စီးရီးများကို ရရှိနိုင်သည်။ စက်အမျိုးအစားတိုင်းကို တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေတွင် စမ်းသက်ပြီးဖြစ်ကာ မည်သည့်မြေပြင်အနေအထားတွင်မဆို ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်မှုကိုအာမခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ လောင်စာဆီဖြည့်သွင်းမှုအနေဖြင့် (E-CDIS) ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ လောင်စာဆီကို ပစ်စတင်ထိပ် အလယ်သို့ တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းကာပြီးပြည့်စုံသည့်ပေါက်ကွဲမှု ကိုဖြစ်စေပြီး ဆီစားသက်သာစေသည်။ တာဘိုချာ့ စနစ်သည်လည်းအမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေကို ပေးရန်စွမ်းအားကိုတိုးပွားစေပြီး တုန်ခါမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနည်းနည်းဖြင့်အသင့်မြတ်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အမြန်နှုန်းနိမ့်နိမ့်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသည့်လိမ်အားကိုပေးသည်။<br></p>
<p>ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နဲ့ LOVOL ထွန်စက်</p><p><br></p><p>တောင်ပေါ်သားရီရှင်း ( စိုက်ပျိုးရေး ) ကုမ္ပဏီမှာ LOVOL 354, 554, 754 ထွန်စက်များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး (၁) နှစ်၊ (၂) နှစ်၊ (၃) နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
Agrimir အမျိုးအစား နှစ်ဖက်သုံးသိပ္ပံထည်
<p>တူရကီနိုင်ငံထုတ် Agrimir အမျိုးအစား နှစ်ဖက်သုံးသိပ္ပံထည်တစ်မျိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ရှင့် ...&nbsp;</p><p><br></p><p>ဒီသိပ္ပံထည်ကို မြင်းကောင်ရေအား 90 - 120 တို့နဲ့တွဲဆက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး နှစ်ဖက်သုံးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် တဖက်ကိုထည်သွားလေးခုပါဝင်ပါတယ်။</p><p><br></p><p>တူရကီနိုင်ငံထုတ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ အရည်အသွေးကတော့ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်...</p><p><br></p><p>တောင်သူဦးကြီးများ အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ တောင်ပေါ်သားရီရှင်း ( စိုက်ပျိုးရေး ) ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီသော လယ်ယာသုံး ထွန်စက် ရိတ်စက် ပစ္စည်းများကို</p><p><br></p><p>စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ...
<p>1. ဂါလံ - 158</p><p>2. လီတာ - 600</p><p>3. မြင်းကောင်ရေ - 50 hp နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်</p><p>4. PTO စနစ်၊ သုံးနေရာစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုရပါတယ်</p><p>5. ဆေးဖြန်းဧရိယာ - 8 m ( 24 ' ) အကျယ်အထိ ဆေးဖြန်းနိုင်ပါတယ်</p><p>6. Made In Turkey ( တူရဂီ ပစ္စည်း အစစ် ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ် ရှင့်&nbsp;</p><p><br></p><p>တောင်သူဦးကြီးများ အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ တောင်ပေါ်သားရီရှင်း ( စိုက်ပျိုးရေး ) ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီသော လယ်ယာသုံး ထွန်စက် ရိတ်စက် ပစ္စည်းများကို</p><p><br></p><p>စိတ်၀င်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ...
Mccormick ထွန်စက်-S 60
<p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Mccormick ထွန်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Mccormick 50, 60, 60W, 75B, 75BW, 90BW ထွန်စက်&nbsp; များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Mccormick<span style="white-space:pre">	</span>S 60<span style="white-space:pre">	</span></p><p>နည်းပညာ<span style="white-space:pre">	</span>အီတလီ<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အင်ဂျင်မော်ဒယ်<span style="white-space:pre">	</span>3100FLT (STAGE IIIA)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>မြင်းကောင်ရေ HP<span style="white-space:pre">	</span>56<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အင်ဂျင်လည်ပါတ်နှုန်း (RPM)<span style="white-space:pre">	</span>2100<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဝန်ရုန်းအား (Nm)<span style="white-space:pre">	</span>230<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စလင်ဒါအရေအတွက်<span style="white-space:pre">	</span>2780/3<span style="white-space:pre">	</span></p><p>လေဝင်စနစ်<span style="white-space:pre">	</span>တာဗိုစနစ်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရေလိုင်း အအေးပေးစနစ်<span style="white-space:pre">	</span>-<span style="white-space:pre">	</span></p><p>လေစစ်<span style="white-space:pre">	</span>Dry Type<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဆီတိုင်ကီ (လီတာ)<span style="white-space:pre">	</span>65<span style="white-space:pre">	</span></p><p>နှစ်ထပ်ကလပ်ပြား (အခြောက်)<span style="white-space:pre">	</span>280/11<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဂီယာအချက်ရေ<span style="white-space:pre">	</span>8+2<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဂီယာချိတ်ဆက်မှု<span style="white-space:pre">	</span>Constant Mesh<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စက်မြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ)<span style="white-space:pre">	</span>2,50-32,79<span style="white-space:pre">	</span></p><p>PTO ချိတ်ဆက်မှု<span style="white-space:pre">	</span>Hand Operated<span style="white-space:pre">	</span></p><p>PTOလည်ပါတ်နှုန်း (RPM)<span style="white-space:pre">	</span>540<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဟိုက်ဒရောလစ် မတင်နိုင်အား (ကီလိုဂရမ်)<span style="white-space:pre">	</span>2000<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့် တွန်းအား (လီတာ)<span style="white-space:pre">	</span>53<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ထိုင်ခုံ<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်ညှိခြင်း<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရှေ့တာယာ<span style="white-space:pre">	</span>9.50-24<span style="white-space:pre">	</span></p><p>နောက်တာယာ<span style="white-space:pre">	</span>16.9-28<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အကျယ် (မီလီမီတာ/ပေ)<span style="white-space:pre">	</span>1790/5.9<span style="white-space:pre">	</span></p><p>မြေပြင်မှ အကွာအဝေး (မီလီမီတာ)<span style="white-space:pre">	</span>310<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စုစုပေါင်း အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)<span style="white-space:pre">	</span>2754-2954<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Mccormick ထွန်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Mccormick 50, 60, 60W, 75B, 75BW, 90BW ထွန်စက်&nbsp; များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။</p>
Mitsubishi ထွန်စက် GX 50A
<p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Mitsubishi ထွန်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Mitsubishi GX 3600, GX 5000&nbsp; ထွန်စက် များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>လေးလုံးထိုး ဒီဇယ်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>မော်ဒယ်<span style="white-space:pre">	</span>Mitsubishi S4Q2<span style="white-space:pre">	</span></p><p>မြင်းကောင်ရေ<span style="white-space:pre">	</span>50<span style="white-space:pre">	</span></p><p>လည်ပတ်ရေ (rpm)<span style="white-space:pre">	</span>2800<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စလင်ဒါအရေအတွက်<span style="white-space:pre">	</span>4<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဘက်ထရီ (V/Ah)<span style="white-space:pre">	</span>12V/64Ah<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဆီလှောင်ကန် ဝင်ဆန့်နိုင်မှု (L)<span style="white-space:pre">	</span>40<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရှေ့တာယာ<span style="white-space:pre">	</span>8-18<span style="white-space:pre">	</span></p><p>နောက်တာယာ<span style="white-space:pre">	</span>13.6-26<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စုစုပေါင်း အလျှား (mm)<span style="white-space:pre">	</span>3500<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စုစုပေါင်းအကျယ် (mm)<span style="white-space:pre">	</span>1500<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အမြင့်<span style="white-space:pre">	</span>1600<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အလေးချိန် (Kg)<span style="white-space:pre">	</span>1700<span style="white-space:pre">	</span></p><p>မြေပြင်နှင့် ဝင်ရိုးအကွာအဝေး<span style="white-space:pre">	</span>365<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ကလပ်အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>အခြောက်၊ တစ်ချပ်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဂီယာ<span style="white-space:pre">	</span>ရှေ့ ၁၆+ နောက် ၁၆<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဘရိတ်<span style="white-space:pre">	</span>အစို စနစ်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>PTO အပတ်ရေ (rpm)<span style="white-space:pre">	</span>579/881/1098<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ပန့်စီးဆင်းမှုနှုန်း (L/ min)<span style="white-space:pre">	</span>29<span style="white-space:pre">	</span></p><p>မတင်နိုင်မှု (Kg)<span style="white-space:pre">	</span>1900<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Mitsubishi ထွန်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Mitsubishi GX 3600, GX 5000&nbsp; ထွန်စက် များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။<span style="white-space:pre">	</span></p>
Sakpattana ရိတ်စက်-SS 200
<p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Sakpattanaရိတ်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Sakpattana SS 200, SS 300 ရိတ်စက်&nbsp; များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Sakpattana SS 200<span style="white-space:pre">	</span>PADDY<span style="white-space:pre">	</span>CORN<span style="white-space:pre">	</span></p><p>တာဗိုစနစ်ပါဝင်သော လေးလုံးထိုး ဒီဇယ်အင်ဂျင်<span style="white-space:pre">	</span>130HP<span style="white-space:pre">	</span>ဒီဇယ်အင်ဂျင်စလင်ဒါ ၂လုံး + တာဘို<span style="white-space:pre">	</span>130HP<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဂီယာဘောက် အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Model 10 M<span style="white-space:pre">	</span>ဂီယာဘောက် အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Model 10 M<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာအား မောင်းနှင်သော ဟိုက်ဒရောလစ်မိန်းပန့်<span style="white-space:pre">	</span>68 CC<span style="white-space:pre">	</span>ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာအား မောင်းနှင်သော ဟိုက်ဒရောလစ်မိန်းပန့်<span style="white-space:pre">	</span>68 CC<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဂီယာဘောက်စနစ်အား မောင်းနှင်သော ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ<span style="white-space:pre">	</span>68 CC<span style="white-space:pre">	</span>ဂီယာဘောက်စနစ်အား မောင်းနှင်သော ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ<span style="white-space:pre">	</span>68 CC<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဦးတည် ချိုးကွေ့စနစ်<span style="white-space:pre">	</span>F - D<span style="white-space:pre">	</span>ဦးတည် ချိုးကွေ့စနစ်<span style="white-space:pre">	</span>F - D<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ချိန်းပတ် ဘီး အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Steel forming U/C<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်းပတ် ဘီး အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Steel forming U/C<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ချိန်းပတ် အကျယ်(ချိန်းပါတ်တစ်ခု၏ အစွန်းတဖက်မှ အခြား အစွန်းတဖက်ကြား)<span style="white-space:pre">	</span>1940 mm<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်းပတ် အကျယ်(ချိန်းပါတ်တစ်ခု၏ အစွန်းတဖက်မှ အခြား အစွန်းတဖက်ကြား)<span style="white-space:pre">	</span>1940 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ချိန်းပတ် အရှည်<span style="white-space:pre">	</span>2510 mm<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်းပတ် အရှည်<span style="white-space:pre">	</span>2510 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ချိန်းပတ်အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Size C<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်းပတ်အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Size C<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ချိန်းပတ်ရှိ ရိုလာများ (တစ်ဖက်၈လုံးပါဝင်ပြီး အတွင်း၌ချောဆီထည့်သွင်း အသုံးပြုရသည်)<span style="white-space:pre">	</span>D.20<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်းပတ်ရှိ ရိုလာများ (တစ်ဖက်၈လုံးပါဝင်ပြီး အတွင်း၌ချောဆီထည့်သွင်း အသုံးပြုရသည်)<span style="white-space:pre">	</span>D.20<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အထိန်းဘီး ဆိုဒ်<span style="white-space:pre">	</span>406 mm<span style="white-space:pre">	</span>အထိန်းဘီး ဆိုဒ်<span style="white-space:pre">	</span>406 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စပေါ့ကတ်အသွား အရေအတွက်<span style="white-space:pre">	</span>12 - 25teeth<span style="white-space:pre">	</span>စပေါ့ကတ်အသွား အရေအတွက်<span style="white-space:pre">	</span>12 - 25teeth<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ချိန်းပတ်ဘီးဆိုဒ်<span style="white-space:pre">	</span>120 × 680 mm<span style="white-space:pre">	</span>ချိန်းပတ်ဘီးဆိုဒ်<span style="white-space:pre">	</span>120 × 680 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရိုက်လုံးတန်း အရှည်<span style="white-space:pre">	</span>950 mm<span style="white-space:pre">	</span>ရိုက်လုံးတန်း အရှည်<span style="white-space:pre">	</span>950 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရိုက်လုံးတန်းအချင်း<span style="white-space:pre">	</span>420 mm<span style="white-space:pre">	</span>ရိုက်လုံးတန်းအချင်း<span style="white-space:pre">	</span>420 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>သန့်ရှင်းမှုနှင့် ဇကာစနစ်<span style="white-space:pre">	</span>1-1.2 mm<span style="white-space:pre">	</span>သန့်ရှင်းမှုနှင့် ဇကာစနစ်<span style="white-space:pre">	</span>1-1.2 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>သီးခြားသိမ်းဆည်းနိုင်သော စတီးလှောင်ကန်<span style="white-space:pre">	</span>1-1.2 mm<span style="white-space:pre">	</span>သီးခြားသိမ်းဆည်းနိုင်သော စတီးလှောင်ကန်<span style="white-space:pre">	</span>1-1.2 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဦးခေါင်းကို ၃ အစိတ်အပိုင်းများသို့ ခွဲယူနိုင်ပါသည်<span style="white-space:pre">	</span>DVS<span style="white-space:pre">	</span>လည်ချောင်းချိန်းဖြင့် စပါးသယ်ယူသောစနစ်<span style="white-space:pre">	</span>No0. 2080<span style="white-space:pre">	</span></p><p>လည်ချောင်းချိန်းဖြင့် စပါးသယ်ယူသောစနစ်<span style="white-space:pre">	</span>No. 2080<span style="white-space:pre">	</span>ရှေ့စပါးရစ် လွန်လုံးအချင်း<span style="white-space:pre">	</span>370 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရှေ့စပါးရစ် လွန်လုံးအချင်း<span style="white-space:pre">	</span>580 mm<span style="white-space:pre">	</span>ရိတ်သိမ်းနိုင်သော အလျား<span style="white-space:pre">	</span>2270 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဓါးသွားအကျယ် (ဓါးသွား - ၂၀ခု)<span style="white-space:pre">	</span>2240 mm<span style="white-space:pre">	</span>စပါးကိုရိတ်အတန်း ၃ တန်း<span style="white-space:pre">	</span>2000 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စပါးညှိ: 6ဘား (ဖွင့်နိုင်ပါသည်)<span style="white-space:pre">	</span>850 mm<span style="white-space:pre">	</span>ဒါးတန်း ၃ စုံပါဝင်သော ရိတ်သိမ်းသောစနစ်<span style="white-space:pre">	</span>3 pairs<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စုစုပေါင်းအကျယ်<span style="white-space:pre">	</span>2700 mm<span style="white-space:pre">	</span>စုစုပေါင်းအကျယ်<span style="white-space:pre">	</span>2700 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စုစုပေါင်းအလျှား<span style="white-space:pre">	</span>5920 mm<span style="white-space:pre">	</span>စုစုပေါင်းအလျှား<span style="white-space:pre">	</span>5920 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စုစုပေါင်းအမြင့်<span style="white-space:pre">	</span>2350 mm<span style="white-space:pre">	</span>စုစုပေါင်းအမြင့်<span style="white-space:pre">	</span>2350 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အသားတင်အလေးချိန်<span style="white-space:pre">	</span>6400 mm<span style="white-space:pre">	</span>အသားတင်အလေးချိန်<span style="white-space:pre">	</span>6400 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ဆေးသား<span style="white-space:pre">	</span>Powder Coating<span style="white-space:pre">	</span>ဆေးသား<span style="white-space:pre">	</span>Powder Coating<span style="white-space:pre">	</span></p><p>လှောင်ကန်ဝင်ဆန့်မှု<span style="white-space:pre">	</span>1000 Kg<span style="white-space:pre">	</span>လှောင်ကန်ဝင်ဆန့်မှု<span style="white-space:pre">	</span>1200 Kg<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စပါးထုတ်လွန် (အရှည်)<span style="white-space:pre">	</span>165 × 3600 mm<span style="white-space:pre">	</span>စပါးထုတ်လွန် (အရှည်)<span style="white-space:pre">	</span>165 × 3600 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စပါးထုတ်လွန် (အတို)<span style="white-space:pre">	</span>152 × 1780 mm<span style="white-space:pre">	</span>စပါးထုတ်လွန် (အတို)<span style="white-space:pre">	</span>152 × 1780 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>စပါးထုတ်လွန် (လှောင်ကန်အတွင်း)<span style="white-space:pre">	</span>165 × 1250 mm<span style="white-space:pre">	</span>စပါးထုတ်လွန် (လှောင်ကန်အတွင်း)<span style="white-space:pre">	</span>165 × 1250 mm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>"ရိတ်စက်စွမ်းဆောင်ရည်</p><p>ပုံမှန်မြေကွက် ၈- ၁၂ ဧက/ရက်</p><p>မြေကွက်သေး ၆ - ၈ ဧက/ရက်"<span style="white-space:pre">	</span>"ရိတ်စက်စွမ်းဆောင်ရည်</p><p>ပုံမှန်မြေပြန့် ရိတ်ကွင်း ၂- ၃ တန်/ နာရီ"<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Sakpattanaရိတ်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Sakpattana SS 200, SS 300 ရိတ်စက်&nbsp; များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။<span style="white-space:pre">	</span></p>
Feng Dong (Water Pump)
<p>အသုံးပြုပုံ - စိုက်ပျိုးရေး၊ ဉယျာဉ်ခြံမြေ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး၊ အမျိုးမျိုးသော ရေတင်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အမျိုးအစား - ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်ရေတင်ပန့်တွဲ<span style="white-space:pre">	</span></p><p>ရေထွက်နှုန်း -60000 လီတာ / တစ်နာရီ<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အမြင့်ဆုံးရေတင်နိုင်သော အမြင့် -78 ပေခွဲ<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အနိမ့်ဆုံးရေစုပ်နိုင်သော ပေ - 23 ပေ (အောက်ခြေ)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>တစ်မိနစ်ကို အပတ်ရေ 1600 ဖြင့် လည်ပတ်ပြီး 7.5 ကောင်အားဖြင့် လည်ပတ်သည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Specifications <span style="white-space:pre">	</span></p><p>Output Power - 7.5 Hp (4.2kW)</p><p>Pump Diameter - 3"<span style="white-space:pre">	</span>&nbsp; <span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">- တောင်ပေါ်သားရီရှင်း ( စိုက်ပျိုးရေး ) ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီသော လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကို ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်လိုက်နော် ...	<br></span></p>
Honda NCH ( ဓါတ်ဆီရေစုပ်ပန့် )
<p>အမျိုးအစား - Gasoline Water Pump ( ဓါတ်ဆီရေစုပ်ပန့် )<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အသုံးပြုပုံ - စိုက်ပျိုးရေး၊ ဉယျာဉ်ခြံမြေ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး၊ အမျိုးမျိုးသော ရေတင်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Specifications <span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine Power - 5.6 (4.2 Kw)</p><p>Engine rpm - 3600rpm</p><p>Colour - Red, light Green, Black<span style="white-space:pre">	</span> <span style="white-space:pre">	</span></p><p>အမြင့်ဆုံးရေတင်နိုင်သောပေ - 79 ပေ (24 meter)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>23 ပေ (7 meter) အနက်မှရေကိုစုပ်ယူနိုင်ပါသည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>အဝင်ပိုက်အရွယ်အစား -3လက်မ (80 mm)<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">- တောင်ပေါ်သားရီရှင်း ( စိုက်ပျိုးရေး ) ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီသော လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကို ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်လိုက်နော် ...	<br></span></p>
Flying Star (Grain Dryer) စပါးအခြောက်ခံစက်
1 ~ 1 Kyats
<p>v&nbsp; အခြောက်ခံစက်တွင် (၈) လိုင်းစပါးအပူပေးစနစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး စတီးအစစ်ဖြစ်သည့် (၃၀၄) စတီးအမျိုးအစားကိုလည်း အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; အခြောက်ခံစက်ရှိ Blower Motor သည် ဂျာမဏီထုတ် (SIEMENS) အမျိုးအစားကို သုံးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; အခြောက်ခံစက်တွင် အပေါ်/အောက် လွန်စနစ်ကို အသုံးမပြုထားပါ။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; Control Cabinet သည် PLC Touch Screen အမျိုးအစားဖြစ်သည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; အခြောက်ခံစက်ဘေးကာဗာတွင် (1.5 mm) ရှိသောသံသားကိုသုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; Ball Bearing မှာ ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် (NSK) အမျိုးအစားကို သုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; အခြောက်ခံစက်တိုင်းတွင် Wind Mixture Device လေပူထိန်းညှိစနစ်ပါရှိခြင်း။( လေအိုးပါရှိခြင်း)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>v&nbsp; Moisture Meter စက်သည် ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် (KETT) အမျိုးအစားဖြစ်သည်။</p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Flying Star (Grain Dryer)<span style="white-space:pre">	</span>Model- 5HGM-15</p><p><br></p><p>Type (လည်ပတ်မှုပုံစံအမျိုးအစား)<span style="white-space:pre">	</span>Batch type circulation</p><p>Volume&nbsp; စပါးဝင်ဆန့်မှု (တန်)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Paddy (500kg/m3)<span style="white-space:pre">	</span>15</p><p>Wheal (680kg/m3)<span style="white-space:pre">	</span>16.5</p><p>Outer Dimension&nbsp; အတိုင်းအတာ<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Length x Width x Height (mm)<span style="white-space:pre">	</span>6035*3410*12245</p><p>Husk Burner&nbsp; စပါးခွံမီးဖို<span style="white-space:pre">	</span></p><p>"Husk Burner</p><p>Dimension (mm)"<span style="white-space:pre">	</span>2400*1300*1900mm</p><p>Ignition mode<span style="white-space:pre">	</span>Manual ignition</p><p>Husk Consumption ( Kg/h)<span style="white-space:pre">	</span>40-50</p><p>Fuel&nbsp; &nbsp;အပူပေးလောင်စာ<span style="white-space:pre">	</span>Husk</p><p>Blower motor powerr (kw) အပူစုပ်မော်တာ<span style="white-space:pre">	</span>7.5</p><p>"The total power of Dryer</p><p>Motor (kw)/Voltage (v)"<span style="white-space:pre">	</span>10.7/380</p><p>Time of feeding (min) စပါး/ချုံထည့်ရန်ကြာချိန်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Paddy စပါး<span style="white-space:pre">	</span>45~60</p><p>Wheat ဂျုံ<span style="white-space:pre">	</span>47~62</p><p>Time of Discharging (min) စပါး/ချုံ ထုတ်ရန်ကြာချိန်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Paddy စပါး<span style="white-space:pre">	</span>43~58</p><p>Wheat ဂျုံ<span style="white-space:pre">	</span>48~60</p><p>Moisture reduction rate per hour<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Paddy စပါး<span style="white-space:pre">	</span>0.4~1.0%</p><p>Wheat ဂျုံ<span style="white-space:pre">	</span>0.4~1.0%</p>
Landini - 110B ထွန်စက်
<p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားမဆို စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နှင့် Landini ထွန်စက်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီ မှာ Landini 7860, Super 90, Super 100, Super 110&nbsp; ထွန်စက် များကို ၂၀% နှင့် ၃၀% သွင်းပြီး ၁နှစ်၊ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် ဘဏ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။</p><p><br></p><p>- အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>Direct-Injection, Perkins Engine<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- မော်ဒယ်<span style="white-space:pre">	</span>1104A-44T<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- မြင်းကောင်ရေ<span style="white-space:pre">	</span>110<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- စလင်ဒါအ‌ရေအတွက်<span style="white-space:pre">	</span>4 Cylinders, Turbo<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ဘိုး (Bore)<span style="white-space:pre">	</span>4/105<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- စတုတ် (Stoke)<span style="white-space:pre">	</span>5/127<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- အရွေ့ (Displacement)<span style="white-space:pre">	</span>4400<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- လိမ်အား (Max: Torque)<span style="white-space:pre">	</span>295/400<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- လည်ပတ်ရေ (rpm)<span style="white-space:pre">	</span>2200 (rpm)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ဆီလှောင်ကန် ဝင်ဆန့်နိုင်မှု (L)<span style="white-space:pre">	</span>102<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ရှေ့တာယာ<span style="white-space:pre">	</span>320/85R24<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- နောက်တာယာ<span style="white-space:pre">	</span>460/85R34<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- စုစုပေါင်း အလျှား (mm)<span style="white-space:pre">	</span>4135<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- စုစုပေါင်းအကျယ် (mm)<span style="white-space:pre">	</span>1670 to 2540<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- အလေးချိန် (Kg)<span style="white-space:pre">	</span>3450<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- မြေပြင်နှင့် ဝင်ရိုးအကွာအဝေး<span style="white-space:pre">	</span>430<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ကလပ်အမျိုးအစား<span style="white-space:pre">	</span>နှစ်ထပ်ကလပ်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ဂီယာ<span style="white-space:pre">	</span>F12+ R12<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ဘရိတ်<span style="white-space:pre">	</span>Hydraulic ဆီဘရိတ်<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- PTO အပတ်ရေ (rpm)<span style="white-space:pre">	</span>540-1000<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- ပန့်စီးဆင်းမှုနှုန်း (L/ min)<span style="white-space:pre">	</span>52.3<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- မတင်နိုင်မှု (Kg)<span style="white-space:pre">	</span>4350<span style="white-space:pre">	</span></p>
<p>တောင်ပေါ်သားရီရှင်း(စိုက်ပျိုးရေး)ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တင်သွင်းဖြန့်ချီထားတဲ့</p><p><br></p><p>#Hondanch ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်</p><p><br></p><p>Hondanch ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် လေးတွေမှာဆိုရင် ရရှိနိုင်မဲ့မြင်းကောင်ရေတွေကတော့…</p><p>1. Hondanch 170 F-B (မြင်းကောင်ရေ 7.5HP)</p><p>2. Hondanch 188 F (မြင်းကောင်ရေ 13HP)</p><p>3. Hondanch 192 F (မြင်းကောင်ရေ 22HP) အစရှိသဖြင့် ရရှိနိုင်မှာပါ။</p><p><br></p><p>အင်ဂျင်အမျိုးအစားအနေနဲ့ cylinder, 4-stroke, air cooled type ဖြစ်ပြီ အရောင်အားဖြင့်း သုံးမျိုးရှိပါတယ် (အနီ၊ အစိမ်း၊ အနက်) အရောင်များ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ မိမိစိတ်ကြိုက် မြင်းကောင်ရေ၊ အင်ဂျင်အမျိုးအစားနှင့် အရောင်များကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ...</p><p><br></p><p>အရည်အသွေးဆိုတဲ့နေရာမှာ ပေးရတဲ့ အဖိုးအခနဲ့ ထိုက်တန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်</p><p><br></p><p>သတ္ထုသား၊ ရုပ်ထွက်ဒီဇိုင်း၊ ဆေးရောင်ဆေးသား၊ စတာတွေမှာ သတိထားကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်</p><p><br></p><p>ဆွဲအား ရုန်းအား ကောင်းမွန်ပြီး စက်နှိုးရာတွင်လည်းလွယ်ကူသက်သာခြင်း</p><p><br></p><p>စနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သတ်တမ်းစေ့ခိုင်းနိုင်ဖို့ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ချောဆီ၊ လောင်စာဆီ၊ လေစစ်တွေကတော့ အခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်</p><p><br></p><p>တောင်ပေါ်သားရီရှင်းမှဖြန့်ချီသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ဈေးနှုန်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ချယုံကြည်ရမယ့်အထဲမှာရှိနေပါတယ်</p><p><br></p><p>အပိုပစ္စည်းနဲ့ ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမရှိအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်</p><p><br></p><p>ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်</p><p><br></p><p>စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ...
Manual Seeding Machine (လက္တြန္းမ်ိဳးေစ့ခ်စက္)
<p>မ်ိဳးေစ့ တစ္ေစ့ ခ်င္းခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။</p><p>မ်ိဳးေစ့ အစုလိုက္ ခ်၍လည္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။</p><p>မ်ိဳးေစ့ တစ္ေစ့နွင့္ တစ္ေစ့ အကြာအေဝး ၄လက္မျခားနွင့္ ၉လက္မျခား ျဖစ္ပါမည္။</p><p>အလုပ္လုပ္ပံုလက္တြန္း စနစ္ျဖစ္ပါသည္။</p>